UPDATE: Xidig oo Wax Uusan Fileyn Kala Kulmay Xildhibaanada Hawiye – idalenews.com
UPDATE: Xidig oo Wax Uusan Fileyn Kala Kulmay Xildhibaanada Hawiye
Muqdisho(INO)- War goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in Xildhibaan Xiddig oo ah musharax guddoomiyaha baarlamanka uu kulamo magaalada Muqdisho Kula qaatay qaar kamid ah Xildhibaanada Beelaha Hawiye.
Xildhibaan C/rashiid Xiddig ayaa Xildhibaanada Beelaha Hawiye ka codsaday inay siyaan codadka kana caawiyaan in loo doorto guddoomiyaha baarlamanka.
Wararka ayaa sheegaya in kulanka uusan ku dhammaan sidii uu filayey Xidig, kadib markii xildhibaanada qaar ay muujiyeen inaysan taageeri karin, ayada oo Xidig lagu tuhmayo inay gadaal ka riixayaan Musharax Shariif Xasan iyo dowladda Ethiopia.
Xildhibaan Xiddig ayaa afartii maalin ee lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ka waday ololo uu ku doonaayo inuu ku Hogaamiyo Baarlamaanka, wuxuuna la kulmayaa xildhibaanada beelaha kala duwan..
Xildhibaan Xiddig ayaa waxaa horay uu ula kulmay xildhibaanada beelaha Daarood, balse badankood u sheegay inuu tanaasulo maadama guul uu gaaro ay ka dhigan tahay in beesha ay weyn doonto xilalka madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha.
Ugu dambeyntii, Lama oga in Xildhibaan Xiddig uu kusoo bixi doono Doorashada iyo in kale maadaama ay soo foodsaartay kalsooni darro kaga imaaneysa dhanka Xildhibaanada intooda badan.
Dhageyso: Israel oo raaligelin ka bixisay hadal ka fakaday diblumaasi
Dhageyso:Waxgarad iyo Mas’uuliyiinta Jubbaland oo si Wadajir ah u taageeray Musharaxnimada Jawaari